Maimaim-poana ny Fiarahana amin'ny olona ao amin'ny USA ny Fiarahana amin'ny tranonkala
Maimaim-poana ny Fiarahana amin’ny olona ao amin’ny USA ny Fiarahana amin’ny tranonkala
Dia amin’ny fomba mirindra voalanjalanja ao ny lehibe rehetra olombelona toetra. Aho tsy vahiny amin’ny fahafinaretana sy ny fampiononana, fa noho izany dia tsy azoko indrindra sacrés.
Aho dia afaka ny ho nikarakara sy tompon’andraikitra, fa tsy hahatonga ny lalàna sy ny fitsipiky ny fivavahana. Aho tsy vahiny amin’ny olon-tiany sy ny sentimentality, afa-tsy ho araka izay mety ho mety amin’ny toe-javatra ity. ny vehivavy tony, tsy miezaka ny hisarika ny sain’ny olona ho amin’ny tenany sy hampiseho ny hafa ny fahamarinana sy ny fahamboniany. afaka ny ho tia sy hankasitraka ny lehilahy iray sy ny mahita azy ho toy ny mpitarika azy ireo. Ny fitiavana ny tena mahaliana ny olona, ny any an-tokotany, ny sarimihetsika, ny fanatanjahan-tena. Tiako ny hahita ny tovovavy amin’ny fiainana mavitrika toerana, mba hizara ny tombontsoa iombonana eo amin’ny fiainana. Ny firenena dia tsy ho ao amin’ny lisitry ny fizarana ny toerana ity. Izaho dia mipetraka any Amerika Atsimo — Ekoatera-Guayaquil.
Mahafinaritra firenena miaraka amin’ny maro ny natiora
Aho olom-pirenena Amerikana dia dimy amby roa-polo taona maro ny fiainana.
mitendry gitara hanoratra hira
tia travel, ary vao manana ny mahafinaritra. mitady soulmate tsy Mitady afa-tsy ny fiainana mpiara-miasa fa ny namana. Ny mpifindra-monina na ny monina ao Brezila Belarosia, fa manana karatra maitso (izany no raha jerena ifotony). Te-hanomboka ny fianakaviana, ny ankizy, ny fotoana miaraka.
Raha tianao koa dia aoka isika hahafantatra
Tongasoa eto amin’ny pejy ny aterineto ny fihaonana amin’ireo olona any Etazonia. Eto dia afaka maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana mijery ny mombamomba ny olona manerana ny firenena. Fa rehefa voasoratra anarana ianao dia mahazo ny fidirana amin’ny chat miaraka amin’ny lehilahy sy ny zazalahy tsy ao ETAZONIA, fa koa any amin’ny firenena hafa izao tontolo izao. Raha te-hihaona, hahita ny fitiavana, ho vaovao ny olom-pantatra sy ny namana, ny antsasany, ny Mampiaraka toerana no miandry anao
← Video momba an'i Brezila, fetiben'ny lahatsary sy ankizivavy ao Brezila